ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်- ၎င်းသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းကိုထုတ်လုပ်ပုံနှင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကား အဘယ်နည်း | Green Renewables များ
စကြဝဠာတွင် အရိုးရှင်းဆုံး ပေါများသော ဒြပ်စင်မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကြယ်များနှင့် ဂြိုလ်များတွင် ဓာတ်ငွေ့ပုံစံဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ရေကဲ့သို့သော ဓာတုနှင့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဟိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည် မတူညီတဲ့ စက်မှုကဏ္ဍတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အသုံးချပရိုဂရမ်တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ၎င်းရရှိပုံတို့ကို သင်သိလိုသမျှကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပါမည်။
1 ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကြွယ်ဝမှု
3 ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ကို ဘယ်လိုသိုလှောင်ထားလဲ။
4 ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးချမှုများ
ဟိုက်ဒရိုဂျင် စကြာဝဠာရှိ မြင်နိုင်သော အရာများ၏ 70% ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ ၎င်းသည် အပေါများဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သေးငယ်သော ကြယ်များ၏ အလယ်ဗဟို၊ ကြီးမားသော ဓာတ်ငွေ့ဂြိုလ်များ (ဥပမာ ဂျူပီတာ နှင့် ဗီးနပ်စ်) တို့၏ လေထုထဲတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ခြေရာခံများ၊ သဘာဝရှိ အော်ဂဲနစ်နှင့် ဇီဝနစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်များစွာက ၎င်းကို ဖယ်ရှားပစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင် အိုင်ဆိုတုပ် အများအပြား ရှိသည် (တူညီသော ဓာတုဒြပ်စင်များ၏ အက်တမ်များ ဖြစ်သော်လည်း နျူထရွန် အရေအတွက် ကွဲပြားသည်)။
ပရိုတိန်း (1H). ပရိုတွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် နျူကလိယတွင် နျူထရွန်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ အသုံးအများဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Deuterium (2H). ၎င်းသည် သာမန် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထက် ပိုလေးပြီး ၎င်း၏ နျူကလိယတွင် နျူထရွန်တစ်ခုနှင့် ပရိုတွန်တစ်ခု ရှိသည်။
Tritium (3H)။ ၎င်းတွင် ပရိုတွန်ဘေးရှိ နျူကလိယတွင် နျူထရွန် နှစ်ခုပါရှိပြီး ၎င်းကို ပိုလေးစေသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၏ အဓိကလက္ခဏာများနှင့်အညီ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်နိုင်သည်-
ရေဆူမှတ်နိမ့်၊ နှင်းကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရှူရှိုက်မိပါက အသက်ရှုရခက်ပြီး အသက်ရှုကြပ်ခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၏ အပူချိန်ကြောင့်၊ ၎င်းသည် လေထဲတွင် အစိုဓာတ်နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ရေခဲများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး သင်၏သိုလှောင်ကန်၏ အဆို့ရှင်များနှင့် အဖွင့်များကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
၎င်းသည် အဆက်မပြတ် အငွေ့ပျံပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ သန့်စင်ပြီး ကန့်သတ်ထားရမည်။ လေထုထဲတွင် နို့ဆီများနှင့် ရောနှောခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံခြုံစွာကာကွယ်ပါ။
ပြည့်နှက်နေသော အခိုးအငွေ့များ၏ သိပ်သည်းဆမြင့်မားမှုသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်များ လွတ်သွားပါက ဖွဲ့စည်းထားသော တိမ်တိုက်အား အလျားလိုက် စီးဆင်းစေသည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းသွားစေသည်။
အမျိုးမျိုးသော ကုန်ကြမ်းများနှင့် စွမ်းအင်များကို အသုံးပြုသည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များစွာ ရှိကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ ဒီအချက်တွေကို အခြေခံပြီး အချိုးအစားတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ 100% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထုတ်လုပ်ပြီး၊ 100% ရုပ်ကြွင်း သို့မဟုတ် ရောစပ်ထားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည့်နေရာနှင့်နီးသော ဗဟိုအဆောက်အအုံများနှင့် အသေးစားယူနစ်များတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများတွင်ပင် စွမ်းအင်ကို ရရှိနိုင်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်ကို စီးပွားရေးအရ အမြတ်အစွန်းဖြစ်စေပြီး ၎င်း၏ ယေဘူယျအသုံးပြုမှုကို ရရှိရန် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် ရှိရင်းစွဲလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို လုံလောက်သောသိုလှောင်မှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်မှ စားသုံးမှုအထိဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို သိမ်းဆည်းထားရမည့် စနစ်များနှင့် အခြေအနေများသည် အဆုံးအသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြားနိုင်သည်-
ဟိုက်ဒရိုဂျင် သိုလှောင်ရေးစနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ သိမ်းပိုက်ထားသော ဧရိယာ၊ အလေးချိန်၊ ထုထည် သို့မဟုတ် အရန်စနစ်များ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ နီးပါးမရှိပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မော်တော်ကားများအတွက် ဟိုက်ဒရိုဂျင် သိုလှောင်မှုစနစ်များ မော်တော်ယာဥ်များသည် သမားရိုးကျ မော်တော်ကားများနှင့် ဆင်တူကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် အနိမ့်ဆုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ယာဉ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် လောင်စာဆဲလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ချိန်ညှိနိုင်သည့် လည်ပတ်မှုနှင့် တက်ကြွသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက်များလည်း ရှိပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍသည် ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင် အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် သတိပြုသင့်သည်။ ယင်းက မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းကို လောင်စာဆဲလ်များ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာများ တိုးတက်မှုအားလုံးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
အလားတူ၊ ဤဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြောသောအခါ၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထောက်ပြရန် လိုအပ်သည်၊ မီးလောင်လွယ်သော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အရောင်မဲ့၊ အရသာမရှိသော၊ အရသာမရှိသော. ဤသဘောအရ သိုလှောင်မှုစနစ်များစာရင်းတွင် ကာဗွန် (တက်ကြွသော၊ ဂရပ်ဖိုက်၊ မော်လီကျူးကာဗွန်ကုတင်များ၊ နာနိုဖိုင်ဘာများ၊ ဖူလာရီနစ် ...)၊ ဒြပ်ပေါင်းများ (NH3)၊ ဖန်မိုက်ခရိုစဖီးယားနှင့် ဇီအိုလစ်များကဲ့သို့သော သုတေသနအဆင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများ ပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဖိအားနည်းသောဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် သတ္တုဟိုက်ဒရိုက်တွင် အရည်ပုံစံဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သိုလှောင်မှုနှင့် အပူချိန်နိမ့်သောသိုလှောင်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးချမှုများ
ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်တွင်ရှိသော နည်းပညာနှင့် ကွဲပြားသောလေ့လာမှုများကြောင့် ၎င်းကို မတူညီသော စက်မှုနယ်ပယ်များတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်ညမ်းစေဘဲ သန့်ရှင်းပြီး ထိရောက်သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုကြောင်း အမြဲသတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး အသုံးချပရိုဂရမ်များထဲတွင် စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်း၊ အာကာသလုပ်ငန်းနှင့် သန့်စင်ရေးစက်ရုံများအတွက် ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုပုံများအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။
၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အအေးခံဓာတ်ငွေ့ကို ဖြစ်စေသည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အစားထိုးလောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းသည် ယာဉ်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို အာမခံစေပြီး ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးသည်။
ဤဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့် အစားအသောက်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းမှု မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဒုံးပျံများကို တွန်းလှန်ရန်အတွက် ထိရောက်သော လောင်စာဖြစ်ပြီး အာကာသပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိများနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်များကို တည်တံ့စေရန် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လေးလံသော ရေနံစိမ်းကို သန့်စင်ပြီး လောင်စာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း အဓိက အခြေခံအချက်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုးများစွာသက်ရောက်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးဆုံးကို မီးမောင်းထိုးပြသည်-
သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ အကြွင်းအကျန်အဖြစ် ရေငွေ့သာ ကျန်ရစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချနိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းမှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုများသို့.
ကြီးမားသော သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ခွင့်ပြုပါ။
လျှပ်စစ်မီးထက် ပိုထိရောက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာကားတစ်စီးသည်5မိနစ်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းထားပြီး လောင်ကျွမ်းသည့်ကားနှင့် တူညီသောအတိုင်းအတာရှိသည်။
ဤအားသာချက်များအားလုံးသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထိရောက်သော၊ သန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်စေသည်၊ စက်မှုနယ်ပယ်များစွာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ဟိုက်ဒရိုဂျင်အရည်